တစ်နှစ်လျှင်စာအုပ်ပေါင်း ၁၈၀ ဖတ်ပါ ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
တစ်နှစ်ကိုစာအုပ် ၁၈၀ ဖတ်ချင်ပါသလား။
ဒီဆောင်းပါးမှာဒီကိန်းဂဏန်းအောင်မြင်ဖို့ငါပေါင်းသင်းခဲ့တဲ့အလေ့အကျင့်ကိုပြတယ်။ သင်လမ်းလျှောက်နေစဉ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စဉ်သို့မဟုတ်နေပူခြင်းကိုခံစားစဉ်“ ဖတ်နိုင်” သည်။ MP3 player တစ်ခုသာလိုအပ်တယ်။
ခေါင်းစဉ်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်နေတယ် မိမိ၏ Ferrari ကိုရောင်းချသောဘုန်းတော်ကြီး။ ကောင်းပြီ, စာဖတ်ခြင်းအများကြီးပြောလိမ့်မယ်။ ပြောတာက "နားထောင်ခြင်း" ပါ။ ငါအရမ်းအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းငါ့အသက်ကိုအတွက်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အကောင်အထည်ဖော်ပါပြီ။
ကျွန်ုပ်၌အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုသည်ကြီးမားသောကြောင့်အိမ်တွင်ရှိစဉ်ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာရှေ့တွင်အမြဲရှိနေသည်။ ညစာစားချိန်မှာတီဗွီကိုသာကြည့်တယ်၊ သတင်းကိုကြည့်ဖို့အဲဒီအခိုက်အတန့်ကိုယူတယ်။ Jorge Bucay ရဲ့စာအုပ်ကိုငါဝယ်ယူခဲ့တဲ့အတွက်မကြာသေးခင်ကငါစာဖတ်ဖို့အချိန်ယူခဲ့တယ် ၀ ိညာဉ်ရေးရာလမ်း။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစာဖတ်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်ရန်တစ်နာရီခန့်ကြိုတင်မှာထားခဲ့သည်။ သို့သော်ဤအရာကိုကျွန်ုပ်အလွန်စွဲလန်းမိသည် ဘလော့ဂ် ငါအဲဒီနာရီ "စား" လေ့ရှိတယ်။
ငါဘယ်တော့မှခွင့်မလွှတ်ဘူးဆိုတာငါ့ရဲ့နေ့စဉ်လမ်းလျှောက်မှုပဲ ငါနေ့တိုင်း ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်လမ်းလျှောက်ရတာကြိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ MP1 player ကိုဝယ်ပြီးငါအမြဲဖတ်ချင်တဲ့ဒီ audiobooks တွေနဲ့ပြည့်လိမ့်မယ်။
ရလဒ်ကတော့ကောင်းတယ်။ ငွေရတတ်သောသူအဖေကညံ့ဖျင်းဖေ ၃ နာရီ ၂၆ မိနစ်ကြာသည်။ နှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်ခြင်း၌ငါကပြီးဆုံးခဲ့သည်။ အခုငါနဲ့အတူရှိနေပါတယ် မိမိ၏ Ferrari ကိုရောင်းချသောဘုန်းတော်ကြီး.
အဆိုပါတိုးတက်မှုစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ ငါနေ့တိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုစာအုပ်တစ်အုပ် "ဖတ်နိုင်" ။ တစ်နှစ်စာအုပ် ၁၈၀ ကျော်ရှိလိမ့်မည်။ ကောင်းပြီလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာအုပ်များ » တစ်နှစ်လျှင်စာအုပ်ပေါင်း ၁၈၀ ဖတ်ပါ
Luisa romero ဟုသူကပြောသည်
အရမ်းကောင်းတယ် !!!! ငါသည်သင်တို့၏ဘလော့ဂ်၏ဤအပိုင်းကိုယခုပိုပြီးပူးတွဲပါဝင်မပြဘူး။ နေ့တိုင်းဖတ်ခြင်းသည်တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းဘာသာရပ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ယုံကြည်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Luisa Romero အားပြန်ပြောပါ
Luisa ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေနပ်စရာပါ။
မာရီယာထရီဇာ Felipe Garcia ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းသောအရာအားလုံး။ အရည်အသွေးများစွာအတူတကွရှာဖွေခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Maria Teresa Felipe Garcia သို့စာပြန်ပါ
Fransheska ဘဲဥပုံ ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင်စကားလုံးများသည်များစွာသောအရာများကိုဖုံးကွယ်ဖော်ပြသည်။ ငါအနှစ်သက်ဆုံးကတော့စာဖတ်ခြင်းပဲ၊ စာလုံးတစ်လုံးစီကိုစာအုပ်ထဲမှာရှာပြီးစာရေးသူပြောချင်တာကိုအနက်ဖွင့်တာကအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်။
Fransheska Ovalle အားပြန်ပြောပါ
Azucena ဟာနန်ဒက်ဇ် Ramirez ဟုသူကပြောသည်
Azucena Hernandez Ramirez အားပြန်ပြောပါ
Daniel murillo ဟုသူကပြောသည်
ဒံယေလ Murillo ကိုစာပြန်ပါ
ဝိုး! တကယ့်ကိုကောင်းတဲ့အကြံပဲ။ ငါအမြဲတမ်းဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်တွေများတယ်၊ ဘယ်အချိန်လဲ ...
သူတို့ကို mp3 သို့ဘယ်လိုပြောင်းလဲ?
အဲဒီစာအုပ်တွေကို audiobook format နဲ့ရှာရလိမ့်မယ်။ Youtube ကိုရှာပြီးရှာပြီးရှာမရဆိုတာကိုရှာပြီးထိုမှအသံကိုထုတ်ယူနိုင်သည်။ Ivoox မှာရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာအုပ်တွေရဲ့အော်ဒီယိုစာအုပ်အနည်းငယ်ကိုသင်တွေ့နိုင်တယ်။